Belulekwe ngokwengqondo abadlali beBafana Bafana | Ilanga News
Home Impilo Belulekwe ngokwengqondo abadlali beBafana Bafana
Belulekwe ngokwengqondo abadlali beBafana Bafana
PHILANI NCALANE noMFANAFUTHI NDLOVU
UJONATHAN Kodjia we-Ivory Coast eshaya igoli eliguqise iBafana Bafana kowokuvula we-Afcon ngoMsombuluko, e-El Salam Stadium, e-Egypt. ISITHOMBE NGABE: BACKPAGEPIX
BELULEKWE ukukhohlwa wu-mphumela womdlalo odlule abadlali beBafana Bafana eyivule kabi i-Africa Cup of Nations (Afcon) ihlulwa yi-Ivory Coast ngo-10 ngo-Msombuluko eCairo, e-Egypt.
IBafana inomdlalo omqoka wesibili kaGroup D ezowugijima neNamibia kusasa ngoLwesihlanu ngo-22h00.
Kumqoka ukuba iBafana iwunqobe lo mdlalo njengoba ingenaphuzu kuleli qoqo okukhona kulona neMorocco yona ezobhekana ne-Ivory Coast kusasa ngo-19h00.
UKwenzakwakhe Ngwenya ohola ithimba leBafana kwi-Afcon, uthi uStuart Baxter ongumqeqeshi we-Bafana, usebenze kanzima ukulu-ngisa isimo semiqondo kubadlali ngenhloso yokuba baye emdlalweni wakusasa benokuzethemba.
Uthi kusukela iBafana ihlulwe yi-Ivory Coast, uBaxter umatasa nokucija imiqondo yabadlali. UNgwenya uthi uBaxter ubabikele ukuthi abadlali basesimweni esikahle sokubhekana nezinselelo zomdlalo wakusasa.
Kuthiwa abadlali bakuqonda kahle ukuthi imidlalo yamaqoqo ifana neyeligi, ngakhoke ithuba lokudlulela phambili lisekhona yinqobo nje nxa bezokwenza kahle kule midlalo emibili esele.
USiyabonga “Nsimbi” Sangweni obeyisiqongqwane seBafana, uthi okumqoka emdlalweni wakusasa wukuthi udonga kumele luhlale lu-phapheme ngaso sonke isikhathi.
Uthi iNamibia iyizwe okungamele nhlobo ukuthi iBafana ilithathe kancane njengoba ibophele abadlali abagijima kwi-Absa Premiership.
“Abadlali beNamibia babazi kahle abadlali bethu ngoba badlala ndawonye kwiPremiership. Kumqoka ukuba siwasebenzise ngendlela amathuba esiwatholayo.
“Abadlali kumele baqhele ezinkundleni zokuxhumana ngoba ziyaphazamisa ngaphambi kwemidlalo yalolu hlobo. Mina lokhu bekungisiza kakhulu ukuze ngi-gxilise umqondo emdlalweni.
“Manje sekudingeka ukuba uBaxter abophele amasosha anezinhliziyo ezinde.
“Kulesi sigaba kabadingeki abadlali abayimifece, kodwa kufuneka abakwaziyo ukulwa ensimini. Kumqoka ukuba umqeqeshi alu-ngise indlela esihlasela ngayo,” kusho uNsimbi ovalele amagoli amabili kwi-Afcon ebikuleli ngo-2013 lapho iBafana iphume khona kuma-quarter final.
UNsimbi udlale isikhathi eside kwiBafana njengoba ebeyingxenye yeFifa Confederation Cup neNdebe yoMhlaba ebikuleli ngo-2010.
UNsimbi uphinde wadlala iCaf Champions League neCaf Confe-deration Cup ne-Orlando Pirates ayisize inqoba izinkomishi ezintathu ngesizini eyodwa, ekubeni ebesanda kunqoba iMTN8 neLamontville Golden Arrows ebicijwa nguManqoba “TV” Mngqithi osengumsizi kaPitso Mosimane opheka iMa-melodi Sundowns.
Previous articleZimshaqisile izinsongo
Next articleKukhalwa ngesifo sePSL kwiBafana